Javier Tebas oo si xiiso leh kaga hadlay suurtagalnimada uu Lionel Messi kaga tagi karo horyaalka La Liga – Gool FM
(Madrid) 23 Okt 2020. Madaxweynaha horyaalka La Liga ee Javier Tebas ayaa ka hadlay suurtagalnimada uu Lionel Messi ku bixi karo, isagoo hoos u dhigay saameynta ay tallaabadan ku yeelan karto qiimaha horyaalka.
Laacibka lixda jeer ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or ayaa argagax ku riday dunida kubadda cagta markii uu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu ka tago Barcelona suuqii kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga, iyadoo ay jireen kooxo badan oo lala xiriirinayay inuu ku biirayo.
Xiddiga reer Argentine ayaa ugu dambayn sii joogay garoonka Camp Nou, iyadoo ay jirto khilaaf la xiriira lacagta heshiiskiisa lagu bur-burin karo, laakiin waxaa wali lala xiriirinayaa inuu ka tagi karo dhamaadka qandaraaskiisa xagaaga soo aadan, xilli Manchester City ay ugu dhowdahay inay la saxiixato, iyadoo Paris Saint-Germain, Juventus iyo xitaa Manchester United ay sidoo kale ku jiraan loolanka.
Haddaba Madaxweynaha horyaalka La Liga ee Javier Tebas ayaa hoos u dhigay saameynta ay tallaabadan ku yeelan karto qiimaha horyaalka, wuxuuna yiri:
“Ma noqon doonto riwaayad, Cristiano Ronaldo wuu baxay Neymar-na wuu baxay, mana ahayn riwaayad”.
“Neymar Jr wuxuu u dhaqaaqay Paris Saint-Germain, mana u maleynayo in Horyaalka Faransiiska uu hadda safka hore kaga jiro kubadda cagta aduunka, tani waa runta”.
“Kuwa u maleynaya in ciyaartoydu ay yihiin kuwa sameeya tartamada, ama qiimaha tartamada waa ay khaladan yihiin”.